Songs गीतहरू तपाईले आफ्नो सेक्सन प्लेलिस्ट थप्नु पर्छ। STAT - प्रेम सेक्स
Songs गीतहरू तपाईले आफ्नो सेक्सन प्लेलिस्ट थप्नु पर्छ। STAT
सयौं प्लेसूचीहरू व्यक्तिको संगीत सूचिहरूमा वरिपरि पर्दछ, प्रत्येक अवसरको लागि एक। तपाईंसँग एक कसरतको लागि छ, एक ध्यानको लागि, एक प्रेरणाको लागि र एउटा कार सवारीहरूको लागि। त्यसोभए, के तपाईंले कहिल्यै आफ्नो सेक्सन प्लेलिस्ट कम्पाइल गर्न यति धेरै विचारहरू राख्नुभएको छ? होईन, तपाईंलाई रञ्ची र टायटिलाटि songs गीतहरू कम्पाइल गर्न आवश्यक पर्दैन तर ढिलो, सुखदायक र रोमान्टिक गीतहरू जुन तपाईंलाई सय हार्मोनको प्लेमा छतबाट फ्लिप गर्न सक्दछ!
यहाँ केहि गीतहरू छन् जुन तपाईंको यौन प्लेलिस्टमा निश्चित रूपमा हुनु हो। स्वतन्त्रतामा केही थप्नका लागि स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस् अर्को पटक मूडमा छिर्नको लागि तपाईंको बत्तीहरू डिम गर्नुहोस्!
गीत १: प्रेममा पागल, बेयन्से
यदि त्यहाँ कोही छ जो तपाईंलाई शून्य देखि १० सम्मको मुडमा ल्याउन सक्दछ, यसको रानी बे। गीतको आफ्नै ग्रे-रिशेड संस्करणको लागि खैरो को पचास Shades, तर मूल पाइ लिन्छ! बेयन्सेको जादुई आवाज र उनले लिईएको उच्च नोटहरू निश्चित रूपमा बेडरूममा तपाईंको उच्च नोटहरू लिन मद्दतको लागि निश्चित छन्!
गीत २: नरक भन्दा तातो, दुवा लिपा
को लेभेटिंग हिटमेकरले यसलाई सामन्य नम्बरको साथ बार्पार्कबाट बाहिर निकाल्छ यो उत्तम अप-टेम्पो ट्र्याक हो जुन तपाईं बेडरूम रूटीनमा तपाईंलाई परिमार्जन गर्नु पर्छ। गीत र संगीत 'केहि मिठो रक्सी जस्तो तल जान्छ'।
गीत:: यो कमाई भयो, सप्ताहन्त
हप्ताको एक फुलिएको अनुहारको साथ आफ्नो भर्खरको आउटिंग संग आफ्नो प्रशंसकहरु स्तब्ध। बाहिर जान्छ कि यो उनको संगीत भिडियो को लागी शीर्ष स्पटहरुमा चार्ट पनि हिट भयो। को स्टारबय गायक लेराउँदछ यो कमाएको (अन्तको क्रेडिटमा पनि प्रयोग गरियो खैरो को पचास Shades ), एक ढिलो तर मोहक ट्र्याक जुन केवल टिक्दैन तर लामो समयको लागि तपाईंको दिमागमा सुस्त रहन्छ।
गीत:: जारा जारा, रेहाना है तेरे दिल में
यो मात्र पश्चिमी संगीत हैन कि सेक्स प्लेलिस्ट मास्टर गर्दछ। घर फिर्ता केही ट्यूनहरू पश्चिममा हराउन निश्चित छन्। विन्दुमा केस: जारा जारा आर माधवन-दिया मिर्जा स्टारर बाट जुन अझै मिलेनियमको सबैभन्दा मन पराइएको रोमान्टिक कल्ट फिल्म रहन्छ! के रीनाको रेशमी कपाल र मैडीको बौद्धिक मुस्कानको बारेमा माया गर्ने छैन? काेशिस गर!
गीत:: मधुरमे, अर्जुन रेड्डी
विजय देवेराकोंडा स्टारर अर्जुन रेड्डी सबै गलत कारणका लागि समाचार बनायो तर दु: खको रूपमा यसका गीतहरूले ठूलो हलचल सिर्जना गर्न सकेन किनकि तिनीहरू हुनुपर्दछ। मधुरामे एक ढिलो अझै टिटिलिटि number् नम्बर हो जुन सही रूपमा खेल्दछ जब शिशुहरू सँगै हुन्छन् — शारीरिक रूपमा। ठिक छ, जब गीत कारणको लागि चित्रित गरिएको थियो, हामी किन यसलाई आफ्नो सम्भावनाको लागि प्रयोग गर्न सक्दैनौं?
गीत:: हावेइन, जब ह्यारी मेट सेजल
छवि: आर्थिक समय
भारतमा शाहरुख खान जत्तिकै रोमान्सको प्रतीक कसैलाई छैन। उहाँलाई कुनै कुराको लागि रोमान्सको राजा भनिनिएन। त्यसोभए, प्रिय विद्यार्थीहरूले नोटहरू र सबैभन्दा राम्रो देखि लामहरू लिन्छन्, यदि उसले तपाईंलाई आफ्नो गीतबाट वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ भने।
यो पनि पढ्नुहोस्: ११ बलिउड चलचित्रहरू क्वारेन्टाइनको समयमा तपाईं द्वि घातुमान-हेर्न सक्नुहुन्छ
महिलाको लागि प्यारा कपाल
जीन ग्रे ग्रे सोफी टर्नर
प्रोटीन फलहरु धनी
सर्वश्रेष्ठ प्रेम अंग्रेजी चलचित्रहरू
स्कूल मा फिर्ता स्वागत मा उद्धरण
होली काठ रोमान्स चलचित्रहरू